Fikarakarana vokatra - Popular Jewelry
Ny fikarakarana ankapobeny
Raha jerena fa malefaka sy mora volavolaina avokoa ny metaly firavaka tsara rehetra, dia manaraka izany fa ny firavaka volamena sy volafotsy dia tokony hanaovana sy hitandrina tsara. Izany indrindra no tranga firavaka manify kokoa sy maivana kokoa, izay mora tohina kokoa noho ireo namany mavesatra kokoa. Ny firavaka tena tsara dia tokony hesorina amin'ny vatana alohan'ny hetsika ara-batana mafy (toy ny asa fanorenana na ny fanatanjahan-tena ifandraisany) satria mety hidona amin'ny zavatra vahiny izy ireo. Ireo lahatsoratra firavaka tena tsara dia tokony hesorina ihany koa alohan'ny handroana satria ny simika mahery ao anaty shampoos sy ny fanasana dia mety handoto na hanimba ny firavaka mihitsy aza.
Ampirisihina mafy ny firavaka volafotsy, rehefa tsy ampiasaina, hotehirizina ao anaty kitapo na fitoeran-drano. Izy io dia miaro ny volafotsy amin'ny fiovan'ny simika misy antony ara-tontolo iainana (toy ny rivotra manankarena oksizenina; hoditra asidra) izay mety hahatonga ny volafotsy ho maloto sy hahavery ny mamirapiratra fotsy fotsy.
Ny takelaka volafotsy efa vita namboarina dia azo averina amin'ny laoniny tany am-boalohany amin'ny alàlan'ny vahaolana fanadiovana simika, toy ilay homenay. Ny fandroana haingana faharoa amby roa-polo ao amin'ny mpanadio dia hanala ireo sosona maloto sy maloto avy amin'ny volafotsy.
Ny vahaolana vahaolana an-trano ho an'ny fanesorana ny fanamboarana tarnish dia misy ihany koa, na dia tsy mora aza izany. Volafotsy volafotsy kely azo apetraka ao anaty vahaolana amin'ny rano fanetsehana na foil alumina ary arotsaka mangotraka; tokony hanatsara ny loko ny firavaka ao anatin'ny minitra vitsivitsy.
Azo anaovana akanjo firavaka volamena raha mandro raha mbola tsy mampiasa zavatra simika mahasosotra amin'ny fandroanao ianao. Aza atao firavaka volamena ao anaty dobo satria mety manimba ny fangaro volamena ny klôro.